ဒူဒူကြီး: Tanker Structure - Cargo Tank Primary Structure Arrangement
Tanker Structure - Cargo Tank Primary Structure Arrangement
"MARPOL Annex 1 regulation" အရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေနံ crud oil နဲ့ ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်း petroleum products တွေကိုသယ်ဆောင်ရာမှာ၊ ကုန်သယ်ဆောင်တဲ့ cargo area နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် marine environment တို့အကြား၊ ballast water တွေဖြည့်သွင်းနိုင်မယ့် double side spaces တွေနဲ့ double bottom spaces တွေထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေကို "double hull tanker" လို့ခေါါပါတယ်။ double hull tanker တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကို DWT လို့ခေါါတဲ့ dead weight tonnage အပေါါမူတည်ပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ DWT တန်ချိန် (၅၀၀၀) အောက် double hull tanker တွေရဲ့ double bottom space ဟာ အနည်းဆုံး minimum depth (၇၆၀) မီလီမီတာ အနက်ရှိပြီး၊ double side spaces သို့မဟုတ် center-line bulkhead တွေကို conjunction အနေနဲ့ တဆက်တည်း၊ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Fig. Typical Mid-ship section
DWT တန်ချိန် (၅, ၀၀၀) နှင့်အထက်၊ double hull tanker တွေရဲ့ double side spaces အရွယ်အစားကို 'mandatory' အနေနဲ့ အတိအကျသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ballast water ဖြည့်သွင်းတဲ့အတွက်၊ double side spaces တွေကို wing ballast tanks တွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ DWT တန်ချိန် တိုးလာတိုင်း၊ wing ballast tanks ရဲ့ အကျယ် breadth လိုက်ပါကျယ်ပြန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ DWT တန်ချိန် (၅, ၀၀၀) မှာ၊ wing ballast tanks ရဲ့ အနည်းဆုံးအကျယ် minimum breadth ဟာ (၁) မီတာ ရှိပြီး၊ DWT တန်ချိန် (၅, ၀၀၀) မှတန်ချိန် (၂၀, ၀၀၀) အထိတိုးသွားတဲ့အခါမှာတော့ wing ballast tanks ရဲ့ အများဆုံးအကျယ် maximum breadth ဟာ (၂) မီတာရှိပါတယ်။ အလားတူ double bottom space ရဲ့ အနက် depth ဟာလည်း၊ DWT တန်ချိန်တိုးလာတိုင်း၊ လိုက်ပါတိုးသွားရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အနည်းဆုံး minimum depth အနေနဲ့ (၁) မီတာအနက်ရှိရန်၊ သတ်မှတ်ထားပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ ဗျက်အကျယ် 'breadth B/ 15' ဟာ၊ double bottom space ရဲ့ depth 'အနက်' ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Typical transverse bulkhead
tanker လို့ခေါါတဲ့ ရေနံ crud oil နဲ့ ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်း petroleum products တွေသယ်ဆောင်တဲ့ သဘေ်ာတွေအတွက်၊ ကုန်သယ်ဆောင်မယ့် cargo tanks တွေရဲ့ design ကိုရွေးချယ်ရာမှာ၊ double hull requirements, strength requirements, impact and damage stability requirements တို့အပြင်၊ သယ်ဆောင်မယ့် ရေနံနဲ့ ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သဘာဝ nature တို့ကိုပါ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသလို၊ MARPOL Annex I, Regulation 24 အရ၊ ပြဌာန်းထားတဲ့ 'အလျှား' နဲ့ 'ဗျက်အကျယ်' တို့ရဲ့အချိုး "ratio of cargo tank length to breadth" ကိုလည်း၊ "limitations on cargo tank size" အဖြစ်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ 'Suezmax' tanker ရေနံတင်သဘေ်ာကြီးတွေမှာ၊ cargo tank ရဲ့အရွယ်အစား capacity ကြီးမားသလို၊ tank အရည်အတွက် (၇) tank မှ (၉) tank အထိ ပါဝင်တဲ့အတွက်၊ တည်ဆောက်ပုံ arrangement လည်း၊ သိသိသာသာ significant changes အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
Fig. Typical general arrangements of double hull tankers
cargo tanks တွေကို၊ ဘယ်နဲ့ညာ port and star board side မှာရှိနေတဲ့ double side spaces တွေရဲ့ အတွင်းဖက်မှ၊ ဒေါါင်လိုက် inner hull longitudinal bulkheads တွေနဲ့ အလျှားလိုက် transversely တဆက်တည်း၊ ဆက်ထားသလို၊ တခါတရံမှာတော့၊ ဘယ်နဲ့ညာ port and star board cargo tank တွေအဖြစ်၊ အလယ်မှာ center-line bulkhead ထည့်သွင်းထားပြီး၊ double side spaces တွေရဲ့အတွင်းဖက်မှ၊ ဒေါါင်လိုက် inner hull longitudinal bulkheads တွေနဲ့၊ အလျှားလိုက် transversely ဆက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်နဲ့ညာ port and star board double side spaces တွေရဲ့အတွင်းမှ၊ ဒေါါင်လိုက် inner hull longitudinal bulkheads တွေနဲ့၊ အလျှားလိုက် transversely တဆက်တည်း၊ ဆက်ထားတဲ့ tank တွေကို၊ 'wide center tank' တွေလို့ခေါါပါတယ်။
ရာသီဥတုဒါဏ်ကြောင့် လူးကာလွန့်ကာသွားလာခုတ်မောင်းရတဲ့အခါ၊ tank တွေအတွင်းမှ ကုန်တွေ လှုပ်ခတ်ပြီး၊ sloshing အနေနဲ့ tank နံရံ boundaries တွေအပေါါ pressure impact သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် wide center tank တွေဟာ ကုန်တင်ကုန်ချ loading/ discharging အခြေအနေတွေမှာ၊ သဘေ်ာရဲ့ တည်ငြိမ်မှု stability ကို ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ stability ရရှိစေရန်အတွက်၊ cargo tanks တွေရဲ့ arrangement မှာ center line intact သို့မဟုတ် perforated bulkheads တွေကို၊ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်လာကြပါတယ်။ longitudinal bulkheads (၁) ခုသာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ single center line bulk head arrangement ရေနံတင်သဘေ်ာတွေမှာ ဘယ်နဲ့ညာ cargo tanks တွေပါရှိပြီး၊ tank ကို shorter cargo tank length အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။
VLCC ဆိုတဲ့ 'very-large crude carriers' ရေနံတင်သဘေ်ာကြီးတွေနဲ့ ULCC ဆိုတဲ့ 'ultra large crude carrier' ရေနံတင်သဘေ်ာကြီးတွေမှာတော့ cargo tanks တွေရဲ့အလယ်မှာ၊ အလျားလိုက် longitudinal bulkheads (၂) ခု ထည့်သွင်းပြီး၊ subdivided အနေနဲ့ ထပ်မံပိုင်းခြားကာ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ VLCC နဲ့ ULCC တို့ရဲ့ cargo tank ဟာ အလျှား length အနေနဲ့ longer cargo tank အဖြစ် ပိုရှည်လာပြီး၊ အနံ width အနေနဲ့ကတော့၊ narrow cargo tank အဖြစ် ကျဉ်းသွားသလို၊ cargo area မှာ ဘယ်နဲ့ညာ port and star board side cargo tanks တွေအပြင်၊ အလယ်ဗဟို center tanks တွေကို၊ ထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာမှာ၊ အသုံးပြုတဲ့ steel တွေကို၊ chemical composition နဲ့ mechanical properties တွေအရ၊ grade A, B, D နဲ့ E ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြထားတဲ့ အက္ခရာစာလုံးကြီးသွားတိုင်း toughness နဲ့ material quality တို့ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသလို၊ resistance လည်းပိုလာပါတယ်။ grade F steel ကတော့ low temperature steel ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ oil tanker တွေရဲ့ structure တည်ဆောက်ရာမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း မရှိတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ A, B, D နဲ့ E grade steel တွေဟာ mild steel တွေဖြစ်ပြီး၊ စတင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကတည်းက specific yield stress တန်ဘိုးတွေကို 235 N/mm2 (24 kg/ mm2), 315 N/ mm2 (32 kg/ mm2)နဲ့ 355 N/ mm2 (36 kg/ mm2) ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ high tensile steel တွေဖြစ်တဲ့၊ grade AH, BH, DH နဲ့ EH တို့ကိုပြာင်းလဲ အသုံးပြုလာကြသလို၊ AH 24, AH 32, AH 36, BH 24, BH 32, BH 36, DH 24, DH 32, DH 36, EH 24, EH 32 နဲ့ EH 36 ဆိုပြီး yield stress ကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ရေနံတင်သဘေ်ာတွေရဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကို (၁) - DWT တန်ချိန် (၂၀, ၀၀၀) အောက်၊ (၂) - DWT တန်ချိန် (၂၀, ၀၀၀) နှင့် အထက်မှ တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အောက်နဲ့ (၃) - DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) နှင့်အထက်ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. Typical mid-ship section for below 20, 000 DWT tanker
(၁) - DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကို၊ (i) longitudinal framing, (ii) double bottom and single deck, (iii) center line longitudinal bulkhead, (iv) double bottom structure consisting of closely spaced floors and girders, (v) double side space with vertical primary webs နဲ့ (vi) single deck with deck transverse ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားတွေ့ရပါတယ်။ ‘longitudinal framing primary structure’ ဟာ longitudinal bulkhead တွေရဲ့ ဘေးတဖက် တချက်နေရာတွေမှာ transverse framing တွေကို တွဲဆက်ထားတဲ့ arrangement ဖြစ်ပြီး၊ အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ရေနံတင်သဘေ်ာ smaller tanker တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ‘double bottom single deck structure’ ကတော့ double side နဲ့ double bottom တွေကို တွဲဆက်ထားတဲ့ arrangement ဖြစ်ပြီး၊ DWT တန်ချိန် (၅၀၀၀) နှင့်အထက်၊ ရေနံတင် သဘေ်ာတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Typical transverse bulkheads for below 20, 000 DWT tanker
DWT တန်ချိန် (၅, ၀၀၀) အောက်ရေနံတင်သဘေ်ာတွေမှာ၊ ‘center line longitudinal bulkhead’ နဲ့ transversely frame တွေကို တွဲဆက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ကြသလို၊ 'center line longitudinal bulkhead' ကို အတွန့်အခေါက် corrugated ပုံစံဖြင့်လည်း၊ တည်ဆောက်လေ့ရှိပါတယ်။ floor spaces နဲ့ girders တွေ တခုနဲ့တခု closely spaced အနေနဲ့နီးကပ်စွာ တတ်ဆင်ထားခြင်းကို၊ ‘double bottom primary structure consisting of closely spaced floors and girders’ လို့ခေါါပါတယ်။ DWT တန်ချိန် (၅၀၀၀) တန်နှင့်အထက် သဘေ်ာတွေရဲ့ 'vertical primary webs' တွေကို second double bottom floor အားလုံးနဲ့၊ တညီတည်း aligned ချိန်ကာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ cargo tanks တွေကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေး cleaning ပြုလုပ်နိုင်စေရန်၊ deck transverses တွေကို single deck ဖြင့် internally သို့မဟုတ် externally တွဲဆက်တတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ အလျှားလိုက်နဲ့ဒေါင်လိုက် vertically or horizontally တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ transverse bulkheads တွေအားလုံးကို၊ အတွန့်အခေါက် corrugated ပုံစံဖြင့် တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိသလို၊ plane bulkheads တွေ ကိုသာ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့ အလျှားလိုက်နဲ့ဒေါင်လိုက် stiffeners တွေဖြင့်၊ တွဲဆက်တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Typical mid-ship sections for up to 150, 000 double hull tanker
(၂) - DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) နှင့်အထက်မှ တန်ချိန် (၁၅၀၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကို၊ (i) longitudinal framing, (ii) double bottom - double side - single deck, (iii) either with or without center line bulkhead, (iv) hopper structure juncture, topside tank juncture, (v) double bottom structure consisting of closely spaced floors and girders, (vi) double side space with vertical primary webs, (vii) single deck with deck transverse နဲ့ (viii) single deck with external deck transverse ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားတွေ့ရပါတယ်။ 'longitudinal framing structure' ဟာ၊ DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ longitudinal framing structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement နဲ့ တူညီသလို၊ 'double bottom - double side - single deck structure' ဟာလည်း၊ DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) အောက် သဘေ်ာတွေရဲ့ double bottom single deck structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement နဲ့တူညီပါတယ်။ 'center line bulkheads' တွေ ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိတဲ့ structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement တွေလည်း ရှိသလို၊ center line bulkhead တွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement တွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် strength ပိုကောင်းလာစေဖို့ double side နဲ့ double bottom တွေနဲ့ hopper structure တွေကို၊ juncture အဖြစ်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းကာ၊ တည်ဆောက်လေ့ရှိပါတယ်။ single deck မှာ topside tank ကို double side နဲ့ juncture အဖြစ်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းကာ၊ တည်ဆောက်လေ့ရှိသလို၊ DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေကဲ့သို့ floor spaces နဲ့ girders တွေ တခုနဲ့တခု closely spaced အနေနဲ့နီးကပ်စွာ တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ 'double bottom primary structure' တည်ဆောက်ပုံ arrangement တွေကိုလည်း၊ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အချို့ tanker တွေရဲ့ double bottom primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement မှာ၊ 'vertical primary webs' တွေကို second double bottom floor အားလုံးနဲ့၊ တညီတည်း aligned ချိန်ပြီးတတ်ဆင်ကာ၊ horizontal side girders တွေကို lower hopper tank ရဲ့ အပေါါဖက် upper flange juncture နဲ့ အောက်ဖက် lower flange juncture အဖြစ်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားတတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တွေ့နိုင်တဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကတော့ 'single or multiple longitudinal girder system' ဖြစ်ပါတယ်။ single deck ရဲ့ deck transverses တွေနဲ့ double side ရဲ့ vertical webs တွေကို၊ တွဲဆက်ရာမှာ longitudinal girder တွေကို support အဖြစ်၊ တညီတည်း aligned ချိန်ကာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ DWT တန်ချိန် (၄၀၀၀၀) အောက်ရေနံတင် သဘေ်ာတွေမှာတော့ 'single or multiple longitudinal girder system' ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ external deck transverses တွေ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Fig. Typical transverse bulkhead arrangements for up to 150, 000 DWT double hull tanker
DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) နှင့်အထက်မှ တန်ချိန် (၁၅၀၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ oil-tight transverse bulkhead အဖြစ်အသုံးများတဲ့၊ ပုံသဏ္ဍန် configurations တွေကတော့ (i) - 'vertically corrugated bulkheads' configuration နဲ့ (ii) - 'plane bulkheads' တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ vertically corrugated bulkhead နဲ့ vertical webs တွေကို၊ upper and lower stools တွေဖြင့် ချိတ်ဆက်တင်ဆင်သလို၊ plane bulkhead နဲ့ vertical webs တွေကိုတော့ vertical stiffeners တွေနဲ့ horizontal stringers တွေဖြင့် ချိတ်ဆက်တင်ဆင်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ deadweight တိုးလာတာနဲ့အမျှ၊ yield strength တန်ဖိုးပိုများတဲ့ higher tensile steel အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်လာပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် HT32 နဲ့ HT36 high tensile steel တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။
(၃) - DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) နှင့် အထက် သဘေ်ာတွေရဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကို၊ (i) longitudinal framing, (ii) double bottom - double side - single deck, (iii) hopper structure juncture, (iv) two longitudinal bulkheads, (v) double side with vertical primary webs, (vi) single deck with deck transverses, (vii) transverse vertical primary webs နဲ့ (viii) double bottom primary structure consisting of floor space and longitudinal girders ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားတွေ့ရပါတယ်။ 'longitudinal framing structure' ဟာ၊ DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) အောက် သဘေ်ာတွေရဲ့ longitudinal framing structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement နဲ့ တူညီသလို၊ 'double bottom - double side - single deck structure' ဟာလည်း၊ DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) အောက် သဘေ်ာတွေရဲ့ double bottom single deck structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement နဲ့တူညီပါတယ်။ 'hopper structure juncture' structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ဟာလည်း၊ DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) နှင့်အထက်မှ တန်ချိန် (၁၅၀၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ hopper structure juncture တည်ဆောက်ပုံ arrangement နဲ့တူညီပါတယ်။
cargo area ကို longitudinal bulkheads (၂) ခုဖြင့် ပိုင်းခြားရာမှ၊ အလယ် center tank နဲ့ ဘယ်နဲ့ညာ port and star board side cargo tanks တွေဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ 'two longitudinal bulkheads' primary structure arrangement လို့ခေါါပါတယ်။ တခါတရံမှာ DWT တန်ချိန် (၂၀, ၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ longitudinal framing structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကဲ့သို့၊ center line longitudinal bulkhead (၁) ခုတည်းကိုသာ တတ်ဆင်ပြီး၊ cargo area ကိုဘယ်နဲ့ညာ port and star board side cargo tanks တွေအဖြစ်၊ တည်ဆောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ 'double side with vertical primary webs' တည်ဆောက်ပုံမှာ၊ vertical primary web အခြင်းခြင်း၊ တညီတည်း aligned ချိန်ပြီး တတ်ဆင်ထားသလို၊ တခါတရံမှာ DWT တန်ချိန် (၂၀, ၀၀၀) နှင့်အထက်မှ တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အောက် သဘေ်ာတွေရဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကဲ့သို့၊ second double bottom floor အားလုံးနဲ့၊ တညီတည်း aligned ချိန်ပြီးတတ်ဆင်ထားတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် horizontal side girders တွေကို၊ lower hopper ရဲ့ အပေါါပိုင်း upper part မှာတွဲဆက်တတ်ဆင်ထားပြီး၊ အရံ additional horizontal side girders (၂) ခု သို့မဟုတ် (၃) ခု ခန့်ကိုတော့ transverse bulkhead မှ horizontal stringers တွေနဲ့၊ တညီတည်း aligned ချိန်ကာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Fig. Typical mid-ship sections for above 150, 000 DWT double hull tanker
'single deck with deck transverses' တည်ဆောက်ပုံ၊ arrangement ကတော့၊ DWT တန်ချိန် (၂၀, ၀၀၀) နှင့်အထက်မှ တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) အောက်သဘေ်ာတွေရဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံ arrangement ကဲ့သို့ single deck ရဲ့ deck transverses တွေနဲ့ double side ရဲ့ vertical webs တွေကို၊ တွဲဆက်ရာမှာ longitudinal girder တွေကို support အဖြစ်၊ တညီတည်း aligned ချိန်ကာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ primary structure တည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ 'transverse vertical primary webs' တည်ဆောက်ပုံ၊ arrangement မှာ အလယ်ဗဟို center cargo tank နဲ့ ဘယ်နဲ့ညာ port and star board side cargo tanks တွေအတွင်းမှ၊ transverse vertical primary webs တွေကို၊ ကန့်လန့်ဖြတ် cross-tie အနေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
Fig. Typical transverse bulkhead arrangements for above 150, 000 DWT double hull tanker
longitudinal bulkhead မှာ longitudinal girders တွေကို၊ တခုနဲ့တခု (၄) မီတာမှ (၆) မီတာခန့် floor space အကွာအဝေးထားပြီး၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ arrangement ကို၊ 'double bottom primary structure consisting of floor space and longitudinal girders' primary structure တည်ဆောက်ပုံလို့ခေါါပါတယ်။ DWT တန်ချိန် (၁၅၀, ၀၀၀) နှင့် အထက် tanker သဘေ်ာတွေမှာ၊ oil-tight transverse bulkhead အဖြစ်၊ plane bulkhead configuration ပုံသဏ္ဍန်တမျိုးတည်းကိုသာ၊ အသုံးပြုပြီး vertical webs တွေကိုတော့ vertical stiffeners တွေနဲ့ horizontal stringers တွေဖြင့် ချိတ်ဆက်တင်ဆင်ထားပါတယ်။
Reference : “Guidelines for the Inspection and Maintenance of Double Hull Tanker Structures” - Tanker Structure Co-operative Forum 2010 © International Chamber of Shipping, London and Oil Companies International Marine Forum, Bermuda.
Posted by ကိုထွန်း at 18:23
Bino 10 August 2012 at 00:17
ရေကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါး ငတ်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ၊